Yiba ngumthengisi kwakhona - Jinhua Ecubmaker Technology Co., Ltd.
Ngophuhliso 3D technology yoshicilelo, izicelo umshicileli 3D ziya zithandwa ngakumbi kubomi babantu bemihla ngemihla. Kubonakala ngathi lithuba elihle lokufumana imali kunye nokwakha ikhondo lomsebenzi kwilizwe elitsha. Ukuba ngomnye wabavelisi bokuqala kwimarike yoshicilelo ye-3D, sinamava kuphando, uphuhliso kunye nentengiso. Ukulungiselela ukuba abantu bonwabele ukonwaba kweeprinta ze3D, kwaye zenze kube lula ngakumbi kubalandeli bethu be-EcubMaker 3D ukuba basebenzise iiprinta, i-EcubMaker ikhangela abathengisi, abasasazi, kunye nabathengisi kwihlabathi liphela! Ukusukela oko, abathengi bethu bagubungela bonke ubuchwephesha kunye nothengiso, olunje ngeevenkile zokuthengisa, abathengisi, iingcali zemfundo, njl.Akukhathaliseki ukuba unomdla wokuziqalela ishishini lakho, okanye unezinye izimvo ezilungileyo malunga nomshicileli we-3D. Ukuba ucinga unamava okuqhuba uphawu lwakho. Inkonzo ye-OEM iyafumaneka. Wamkelekile ukuba ube kunye nathi ngalo mzuzu. Njengomkhokeli ophambili wophando kunye noyilo lokuprinta okungu-3d, sihlala sithatha umgangatho ophambili, sigxile ekwenzeni umshicileli ogqwesileyo ngokusebenza okuphezulu, kunye nokunikezela ngeenkonzo ezilungileyo kuye wonke umntu. Wamkelekile nonke ukuthengisa iimveliso zethu. Injongo yethu kukuvumela ukuthembela kwakho kububutyebi. Sifuna ukufumana imeko yokuphumelela kunye nokwakha ubudlelwane bexesha elide.
I-EcubMaker 3D Technology, eyasekwa ngo-2013, igxile ekudibaniseni uphando lomshicileli we-3d, uyilo, kunye norhwebo ngokubanzi. Ukongeza, iividiyo zovavanyo lomshicileli we-EcubMaker zibone amakhulu amawaka eembono kwiYouTube. Uninzi lweewebhusayithi ezishicilelweyo ze-3D ziye zavavanya abaprinta bethu, basilinganise njengelona xabiso lixabiso lophawu izihlandlo ezimbalwa, ezinje ngeGadget Flow, iRoboturka, 3Dpc.com njalo njalo.
2. Itekhnoloji neNkxaso yeNkonzo
Iqela le-R & D ye-EcubMaker yeenjineli ezinezakhono eziphezulu kakhulu zinamava obuchwephesha obunzulu kubuchwephesha bokushicilela obenziwe nge-3D ukubonelela ngobuchwephesha bobuchwephesha. Ngeli xesha, eyona nkonzo ilungileyo emva kokuthengisa ikwabonelelwa ziingcali ze-EcubMaker 3D. Sineqela lethu lenkonzo esemgangathweni emva kokuthengisa, ebambelela kumxholo "weMicimbi yabaThengi" ngenkqubo esemgangathweni yenkonzo esebenzayo, elula kunye nokwenza izinto elubala. Ukuza kuthi ga ngoku sinodumo oluphezulu kwinkxaso yethu Emva kwentengiso ngenxa impendulo yabo ekhawulezayo kunye nentsebenziswano enobungane.
3. Umgangatho uQinisekisiwe
Zonke iimveliso zethu zidlulile kumgangatho wamazwe aphesheya kunye nezatifikethi zokusingqongileyo ezinje nge-FDA, CE, FCC, kunye neROHS, njl. Sizimisele iinjongo ezintathu ngaphakathi kwenkampani. Onke amalungu avavanywe ixesha elininzi ngaphambi kokuba apakishwe kwaye iqela lethu elinamava lolawulo lomgangatho luye kuvavanyo lwexesha elide kuwo wonke umshicileli ukuqinisekisa ukuseta ukuya kwisikhephe. Ukufikelela kwicandelo lokupakisha lokugqibela yonke iprinta kufuneka iphumelele kuvavanyo lolawulo lomgangatho kungenjalo siyithumela kwisebe lokwenziwa ngokutsha. Ibhokisi igcwele i-Styrofoam ekumgangatho ophezulu ukukhusela umshicileli ekufudukeni okuphezulu kwaye kufuneka kudlule kuvavanyo lokunyamezela ngaphambi kokuba ulungele ukuthunyelwa. Ke nabani na unokuqiniseka ukuba umshicileli uya kufikelela kuloo ndawo ngaphandle kokonakala kwangaphakathi kwezothutho.
4. Ixabiso lezoQoqosho
Siyakholelwa ukuba abaPrinta bethu baluhlu ngalunye lwabantu. Asikhe sicinge ngemiba ethile yabathengi. Ke cinga ngexabiso ngokwenzuzo encinci kwaye unike eyona nkonzo ibalaseleyo kwicandelo ngalinye. Ixabiso lethu leemveliso lixabiso eliphantsi kuneprinta yoluhlu olufanayo ngoku. Kuba sijonga ishishini ixesha elide, sifuna ukufumana ukuthembela hayi ukucinga nje ngenzuzo. Yintoni i-EcubMaker ekulindeleke ukuba iququzelele wonke umntu ukuba azi malunga ne-3D itekhnoloji yokuprinta kwaye onwabele ukonwaba ekwenzeni amaphupha abo abe yinyani. Ungathandabuzi ukunxibelelana nathi ngexabiso elithengiswayo xa ukuthengwa kwe-bulking kufuneka. Ngoncedo lokuthenga okuninzi kunye nolawulo lwentengiso oluphambili, i-EcubMaker inciphisa kabukhali iindleko zeemveliso ukuqinisekisa ngenzuzo yabathengisi, ukunceda abasebenzisi bokugqibela ukugcina imali.
Silindele ntoni kuwe?
• Ukuqonda okungcono malunga nePrinta oyifunayo.
• Sixelele ngesicwangciso seshishini lakho kunye nenkampani yakho
Sebenzisana nathi malunga nexabiso. Njengoko sihlala sikunika elona xabiso lithethwayo kuwe.
• Ukukhuthaza uphawu lwethu kunye noshicilelo lwe-3D ngokukuko.
• Ukuba unomdla wokulahla, sinyanisile ukusebenzisana nawe.
Indlela yokufaka isicelo?
Bhala apha: Sales01@zd3dp.com
Nxibelelana nathi nangona le imeyile. Sikhululekile ukusixelela ngawe kunye nendlela esinokukhulisa ngayo ubudlelwane beshishini lwexesha elide. Sijonge phambili kwi-imeyile yakho. Uya kuyifumana impendulo ngokukhawuleza nje ukuba siyifumene. Ndiyabulela kakhulu ngexesha lakho.